Ixesha le-bachelor thesis I Uthatha ixesha elingakanani umsebenzi wam? Ipapernerds
NgoJulayi 4, 2019
, Ulungile ukwazi
Ngaphambi kokuba uqale ukubhala eyakho ithisisi yesidanga umsebenzi wokuqala kufuneka wenziwe. Oku kunokuba kukuchitha ixesha elininzi. Ixesha lomsebenzi wokulungiselela lixesha lilonke lika ithisisi yesidanga ukubandakanywa.
Phambi kwakho ithisisi yesidanga Isishwankathelo esinentsingiselo kufuneka senziwe. Kuphela kuxa isishwankathelo samkelwe yisuphavayiza yakho okanye umhlohli wakho apho unokufumana khona ithisisi yesidanga bhalisa kwi-ofisi yoviwo yeyunivesithi. Kuphela kusemva kweli xesha apho ixesha onalo lokudala umsebenzi wakho liqala ukusebenza.
Ukuze wenze i-synopsis enentsingiselo, isihloko kufuneka kuvunyelwane ngaso nomphathi wakho. Ngapha koko, ukukhangela uncwadi-nokuba kubi kuphela-kuyafuneka. Isishwankathelo siyafana ithisisi yesidanga iyakheka ukwenyuka. Imigaqo kufuneka iqatshelwe. Kwiimeko ezininzi kukho ishedyuli yefayile ye- ithisisi yesidanga efunekayo ekuvezeni. Ewe Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ukulawulwa kwexesha. Ulawulo lwexesha luyakwenza ukuba usebenze ngokufanelekileyo. Kuba ishedyuli kufanele ukuba nayo ibe namaxesha okuhlaziya-kodwa ezi azidweliswanga ngokucacileyo-unethuba nenkululeko yokucwangcisa iholide emfutshane ngelixa ubhala ithisisi yakho ye-bachelor.
Iimfuneko ze ithisisi yesidanga unokufumana kwisuphavayiza yakho okanye kwi-ofisi yoviwo eyunivesithi. Ixesha elibekiweyo lokwenza ifayile ye- ithisisi yesidanga Ziinyanga ezintathu ukuya kwezine. Ubude bunokuba phakathi kwamaphepha amabini ukuya kumashumi amane.
Xa usifumana isihloko, kwavela kwaba luncedo kakhulu ukuba ungasiqondi isihloko ngokubanzi, kodwa endaweni encinci kakhulu ngemiba embalwa. Kwelinye icala, oku kuqinisekisa ukuba awuphulukani nomsonto emsebenzini wakho. Ngesihloko esibanzi kakhulu nesingacaciswanga kakuhle, kukho umngcipheko okhawulezayo wokuphambukela kwimiboniso yesibini engenanto yakwenza nesihloko somsebenzi. Kwelinye icala, isihloko esincinci kakhulu sikunika ithuba lokuba kuncinci uncwadi ngesihloko sakho. Oku kwenza ukuba kube lula ngophando loncwadi, kodwa izakhono zakho zeempikiswano ziyafuneka ukuze ube nobuchule ngakumbi. Kule nkalo, ukubonisana ngokusondeleyo nomphathi wakho kuyafuneka.
Ukuba umphathi wakho unika izindululo zoncwadi, kuyacetyiswa ukuba ubandakanye kuzo zombini izishwankathelo nakwiphepha ithisisi yesidanga ukucingela. Amampunge omntu awazi mida malunga noku. Akukho namnye umfundisi-ntsapho okanye uprofesa okwi ithisisi yesidanga uyakuthanda ukufunda igama lakhe ngohlobo lweekowuti.
Sele kwiintetho zokuqala malunga neyakho ithisisi yesidanga isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwakho ithisisi yesidanga iya kuba: yempembelelo okanye ithiyori. Ixesha elifunekayo kwi-thesis ye-empirical iya kuqikelelwa ukuba ingaphezulu kune-thesis yethiyori. Kungenxa yokuba ukongeza kuphando loncwadi, kufuneka kwenziwe uphando, lwenziwe kwaye luvavanywe.
Uphando loncwadi lunokujongwa njengenqanaba lokulungiselela. Ihlala ichitha ixesha elininzi. Namhlanje kunokwenziwa ngeendlela ezininzi kusetyenziswa uluhlu lweenkcukacha ezahlukeneyo zesayensi. Nangona kunjalo, oku akukugcinisi uhambo oluya kwithala leencwadi laseyunivesithi. Uncwadi oluphambili kakhulu alufane lufumaneke kwi-Intanethi njengePDF okanye enye ifayile. Ukuba uncwadi oluphambili alufumaneki kwilayibrari yakho yaseyunivesithi kuba lusandula ukubolekwa ngomnye umfundi okanye lufumaneka kuphela kwimali mboleko yolwimi, uya kuphulukana nexesha elininzi elibalulekileyo ngenxa yezi meko. Kwelinye icala, ngelixa ulinde uncwadi olubalulekileyo emsebenzini wakho, ungalwandisa ukhangelo loncwadi kulo naluphi na uncwadi lwesibini.
Kuyanceda kakhulu ukusebenza kunye nezicatshulwa kwinqanaba lokukhangela uncwadi. Ngokukodwa, ulwazi olufanelekileyo lwe-bibliographic kufuneka luqatshelwe ngezicatshulwa. Kungenxa yokuba ukucaphula ngokuchanekileyo okanye ukubeka amagama ngendlela echanekileyo kubalulekile kuwo nawuphi na umsebenzi wesayensi. Ukwenziwa kwencwadi yokubhalwa kweencwadi kulawulwa yimimiselo kasihlalo okanye yeofisi yoviwo. Ukusilela ekuthobeleni le mimiselo kunye nemimiselo iya kunciphisa umgangatho wakho ithisisi yesidanga! Nokuba ungangumxholo owahlukileyo kangakanani na, awuyi kufumana ibakala le- "1" ukuba iinkcukacha azifezekiswanga.
Kwinqanaba elilandelayo lakho ithisisi yesidanga Imalunga nolwakhiwo loncwadi kunye nezinto eziphathekayo. Sele ubhale ubume kwisishwankathelo. Nangona kunjalo, ngoku kunokuvela ukuba ubume kufuneka butshintshwe okanye bandiswe. Kwesi sigaba kunokuba luncedo ukuthetha nomphathi. Kwimeko yomsebenzi wobungangamsha, umsebenzi wezobugcisa wenziwa ngeli xesha ngeli xesha.
Xa ugqibile umsebenzi wokulungiselela ngohlobo lokukhangela uncwadi, ungaqala ukubhala eyakho ithisisi yesidanga qalisa. Ukubhala yeyona ibhloko inkulu yexesha ngaphakathi kwexesha elibekiweyo. Xa useta ishedyuli, kubalulekile ke ukuba ulungise ixesha eliza kubhalwa kwisahluko ngasinye. Oku kuyakwenza ukuba uqiniseke ekupheleni kosuku okanye evekini ukuba uhlale ngaphakathi kwixesha elinikiweyo. Ukuba usilele nakwisakhelo sexesha, ngoku kukho ithuba lokuzivuza. Indlela obonakala ngayo umvuzo wakho kukucinga kwakho. Umvuzo kunye nekhefu okanye ixesha lasimahla zizinto ezibalulekileyo ekucoceni ingqondo yakho ukuze ufumane izimvo ezintsha kunye noololiwe bengcinga. Enye yeendlela zokucwangcisa ikhefu kukuthatha uhambo emoyeni omtsha. Bazalisa ioksijini. Oku kunceda ingqondo yakho ukuba ibandakanyeke kwiindlela ezintsha zokujonga umxholo.
Ukubhalwa kwe ithisisi yesidanga iya kujongwa njengenguqulelo eluhlaza okwangoku. Uhlengahlengiso oluhle lwenzeka ekugqibeleni. Inguqulelo erhabaxa yenziwe isahluko ngesahluko, ukuqala ngokwazisa kwinjongo, ulwakhiwo kunye nendlela yokusebenza. Ezinye izikhokelo zikwatsho ukuba intshayelelo kufuneka ibhalwe kuphela emva kwezinye izahluko ze- ithisisi yesidanga zenziwe. Nangona kunjalo, le ndlela ayikhuthazwa, ngakumbi kuba intshayelelo sele inolwazi olubalulekileyo ngomsebenzi wonke. Ayisixeleli ukuba isishwankathelo kunye nokubambeka kunokubhalwa kuphela emva kokuba ugqityiwe umsebenzi.
Emva kokungeniswa, iziphumo zibonisiwe. Ingxoxo elandelayo ithatha ukuba umxholo uphethwe ngokuzimeleyo. Izimvo ezahlukileyo ziyahamba kwesi sahluko kwaye zichaziwe kwimeko yazo.
Isiphelo, isishwankathelo kunye nembonakalo ziyenziwa.
Nje ukuba eli nqaku lifikelelwe, ibibliografi kunye nezinye izikhombisi (iitafile, amanani kunye nezifinyezo) ziyenziwa. Xa usenza i-bibliografi, izixhobo ezivela kwi-Intanethi ezinje nge B. Zotero okanye iCitavi uncedo oluxabisekileyo. Zombini izixhobo zinokudityaniswa kwiinkqubo zokubhaliweyo. Nangona kunjalo, yiZotero kuphela sisixhobo sasimahla, iCitavi inikezelwa kuphela njengesixhobo sasimahla kuhlobo olusisiseko.
Nje ukuba izikhombisi zenziwe, umsebenzi ngoku ulungisiwe. Inguqulelo eluhlaza ikhangelwe ukugqibelela, izingqinisiso ezichanekileyo kwimithombo kunye nokuthotyelwa kweemfuno ezisesikweni. Iimfuno ezisesikweni zahlukile kweyunivesithi ukuya eyunivesithi, kwaye kwezinye iimeko kukho iyantlukwano kumasebe ngamasebe.
Ngaba i-hyphenation ivumelekile ukongeza kulungiso?
Umda we-Edge ngasekhohlo nasekunene nangasentla nangaphantsi.
Ifonti ihlala i-Arial okanye i-Times New Roman. Ubungakanani befonti kwisicatshulwa esisebenzayo yi-12 pt. Isithuba somgca siyahluka phakathi ko-1 no-1,5.
Ubungakanani befonti yezihloko kunye nezihlokwana ukuya kwinqanaba lesithathu okanye lesine ziyahluka ngokuxhomekeka kwinkcazo. Uhlobo lweBold okanye uhlobo oluqhelekileyo lukwachaziwe kwiinkcukacha. Imibhalo esemazantsi okanye isicatshulwa kwimibhalo esemazantsi zihlala zibhalwa 2 pt encinci kunombhalo womzimba.
Ukongeza kwezi mfuno zisesikweni, imiba yeelwimi nayo iyajongwa. Izivakalisi ezinde nezintsonkothileyo zisenokufaneleka kwisicatshulwa sesiLatin nguKesare. Kwiphepha lezesayensi, nangona kunjalo, ukwakhiwa kwezivakalisi kucace gca nangokucacileyo. Oku kulandela koku ukuba umsebenzi wakho, iingxelo kunye nezigqibo zakho kufuneka ziqondwe kwangoko nangubani na oqhelene nomxholo. Ukufezekisa ezi mfuno kubandakanya ukulandelelana ngokulandelelana kwezahluko ezizodwa. Le nto kuthiwa ngumtya oqhelekileyo kufuneka ibonakale ngalo lonke ixesha.
Ukuba ufika kweli nqanaba ithisisi yesidanga Ngoku kukho elinye inyathelo elibaluleke kakhulu: isigaba sokugqibela ngokufunda kwakhona, ukuhlela kunye namanyathelo aqhubekayo kwindlela eya kwiinjongo. Ukufunda kwakhona kunye nokuhlela zizinto ezimbini onokuzenza kwaye uvumelekile ukuba uzithumele. Ngamanye amaxesha, abahlohli kunye noonjingalwazi bade bacebise ukuba la manyathelo enziwe ngabantu besithathu.
Nokuba unesixhobo sokupela esakhelwe kwinkqubo yokuqhubekeka kwamagama, ezi nkqubo azizukufumana zonke iimpazamo. Ngapha koko, ibhibliyografi, ukugqibezela kwincwadi kunye nokuphononongwa kwencwadi yokubhalwa kweencwadi kuyenziwa. Uyilo lukhangelwe. Ukuba kukho imfuneko, izikhombisi ezenziwe ngokuzenzekelayo ziyajongwa kwaye zihlaziywe
Kwiimeko ezininzi, i ithisisi yesidanga njengeLizwi okanye ifayile yePDF kunye nohlobo oluprintiweyo nolubotshiweyo. Vumela usuku okanye ezimbini zokuprinta nokubopha umsebenzi wakho.
Ukuba onke amanyathelo omsebenzi agqityiwe ngexesha elifunekayo, ungawugqibezela ithisisi yesidanga Ngenisa.
Ngenxa yolawulo lwexesha olukhankanywe ekuqaleni, uhlala unolawulo kwi ithisisi yesidanga. Ulawulo lwexesha olucwangcisiweyo luyakunceda ukunciphisa uxinzelelo lwengqondo kunye nomzimba womsebenzi wobunzululwazi. Amaxesha ekhefu lokuphumla, ixesha lasimahla kwaye ngokunokwenzeka ikhefu elifutshane ayisengombono, kodwa yinyani.
Ukuba usenemibuzo malunga nefayile yakho ye- ithisisi yesidanga zive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Singoochwephesha kwimibuzo malunga ithisisi yesidanga.
Uqinisekiso lwethu lomgangatho kwindawo yokubhala ghost